“Tsy misy fahadisoan’ilay fiarabe mihitsy. Nalalaka tsara ny lalana saingy nandeha mafy loatra io Sprinter io”, hoy ny raim-pianakaviana iray mipetraka eo akaiky eo.
Sahirana ara-bola noho ny nafitsoky ny fihibohana ny tompon’ny fiara kinanjo dia izao niharam-boina izao ny fananana fotoana fohy monja taorian’ny fisokafan’ny lalana ka nahafahana niverina nitady vola indray.
“Angamba tsy mbola mahafehy ny familiana loatra ilay zazalahy mpamily. Somary mbola boay kely izay ihany mantsy izy”, hoy ny fanamarihan’ny nanatri-maso.
Nanadino lesona noho ny halavan’ny fihibohana angamba ny mpamily amin’ny zotra nasionaly.
Ny talata tolak’andro teo ihany koa mantsy dia nisy fiara Sprinter nitondra mpandeha avy any Ambatondrazaka latsaka an-tatatra tao Ambohimalaza noho ny fandehanana mafy.
Mety ho nikararana ny faty olona raha sanatria tany amin’ny toerana misy hantsana na hady no nifatrarany.
Manao izay ho afany ny ao amin’ny Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety (ATT) amin’ny fisorohana ny lozam-pifamoivoizana.
Rehefa ho avy anefa ny loza na ny patsa iray aza, hono, tsy omby vava.